နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နီပေါဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်က လေဆိပ်တွ? - Yangon Media Group
နီပေါ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးအဖြစ် ရောက်ရှိနေသော နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ Hon. Mr. Ishwor Pokhrel က လေဆိပ်တွင် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့နှင့် ကြိုဆိုခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နီပေါဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက် တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာကေ၊ ပီ၊ ရှာမာအိုလီ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ နီပေါနိုင်ငံသို့ တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီး လာရောက်ရန်နှင့် ”အာရှ-ပစိဖိတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ၂ဝ၁၈” သို့ တက် ရောက်ရန် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက် ဒေသ စံတော်ချိန် နံနက်၁၁ နာရီတွင် နီပေါနိုင်ငံ Tribhuvan နိုင်ငံတကာလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား နီပေါနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ကာကွယ် ရေးဝန်ကြီး Hon.Mr.Ishwor Pokhrel၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နီ ပေါနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Bhim K.Udas၊ နီပေါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြိး သီရီပျံချီ ဦးထွန်းနေလင်းနှင့်ဇနီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်၌ ခရီးဦးကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီး လေဆိပ်တွင် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့် ကြိုဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲအချိန်တွင် နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ နီ ပေါနိုင်ငံသို့ အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဗင်နီဇွဲလား သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ မာဒူရိုပင် အနိုင်ရရှိ သမ္မတသက်တမ်း ဒုတိယအကြိမ် ထမ်းဆောင်
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို စိုးရိမ်စွာဖြင့် ကန့်ကွက်နေကြသည့် ပြည်သူများကို အစိုးရနှင့်လွှတ်တော်??
မန္တလေးမြို့လယ်၌ UN အလိုမရှိ၊ NLD အစိုးရအား အယုံအကြည် မရှိကြောင်း စာရွက်များ လိုက်လံ ကပ်ထားမှုကိ?